एअरपोर्टबाटै अरबौंको हिरा लुटियो :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
एअरपोर्टबाटै अरबौंको हिरा लुटियो ८ फागुन, काठमाडौं । ब्रसेल्स एयरपोर्टमा अरबौंको हीरा लुटिएको छ । लुटेराहरुले एन्टवर्पबाट स्वीट्जरल्याण्ड पठाउन लागिएको हीरा हवाई अड्डाको ठूलो सुरक्षा घेरा तोड्दै सोमबार साँझ चोरेका हुन् ।
ब्रसेल्स एयरपोर्टका प्रवक्ताले बताएअनुसार लुटेराहरुले करिव ३ मिनेटमा हिरा चोरेका थिए । सोमबार साँझ सुरक्षा भ्यानबाट हिरा स्वीट्जरल्याण्ड पठाउन एक हवाई जहाजमा राख्न लागिएको समयमा नै चोरी भएको हो । नकाब लगाएर आएका लटेराहरु हतियारले सुसज्जित थिए ।
तर, घटनाका क्रममा एउटा पनि गोली चलेको थिएन । प्रहरीले हवाई अड्ड नजिकै एक जलेको गाडी बरामद गरेको छ भने लुटपाटमा संलग्न ८ जनाको खोजी भइरहेको छ । एन्टवर्प वल्र्ड डायमण्ड सेन्टरका अधिकारीका अनुुसार लुटिएको हिराको मूल्य ६७ मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी पर्छ । अधिकारीहरुका अनुसार यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो डकैती हो ।
6 Comments on “एअरपोर्टबाटै अरबौंको हिरा लुटियो”
sagar wrote on 19 February, 2013, 19:12
romantic wrote on 20 February, 2013, 4:21
yasto po chor ta……… ke kam 100000/200000 chorera!!!!!!
zee wrote on 20 February, 2013, 7:31
कसरि लुटेछन पछी यसको पनि फिल्म हेर्न पाइएला , दामी बन्छहोला …..
With Love From Desert wrote on 20 February, 2013, 12:26
Yaslai vanchhan Grand Theft…Hats Off to you Guys….aba Baanki jindagi mooj nai mooj…..Yasto po chornoo ta….
ISHOR wrote on 21 February, 2013, 2:42
master mind mannai parcha la shathi ho hammile pani kehi garau hai aba
krishna khadka wrote on 24 February, 2013, 7:38
श्रीमानले इन्टरनेटमा श्रीमतीको आत्महत्या लाइभ हेरे
पाकिस्तानी विमानबाट २ संदिग्ध पक्राउ
अमेरिकामा पुल भाँच्चियो
रसियामा शक्तिशाली भूकम्प, सुनामीको चेतावानीपछि भागाभाग
सिरियाली विपक्षीहरूको बैठक टर्कीमा सुरु
चिनियाँ प्रधानमन्त्री पाकिस्तानमा
अमेरिकामा आँधीले उत्पात मच्चायो,९१ को मृत्यु (फोटो फिचरसहित)
चीन र भारतबीच ८ महत्वपूर्ण सम्झौता
फिलिपिन्समा टस जितेर मेयर
फ्रान्समा समलैंगिक विवाहलाई कानूनी मान्यता